KỌMPUTA MA Ọ BỤ LAPTỌỌPỤ ANAGHỊ AHỤ òKé - WINDOWS - 2019
Kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ anaghị ahụ òké
Mgbe ụfọdụ, onye ọrụ nke Windows 10, 8 ma ọ bụ Windows 7 nwere ike izute eziokwu ahụ na kọmputa (ma ọ bụ laptọọpụ) adịghị ahụ òké - nke a nwere ike ime mgbe mmelite ntanetị, mgbanwe na nhazi nghazi, na mgbe ụfọdụ na-enweghị omume doro anya ọ bụla.
Akwụkwọ ntuziaka a kọwara n'ụzọ zuru oke ihe mere na òké ahụ anaghị arụ ọrụ na kọmputa Windows na ihe ị ga-eme iji dozie ya. Ikekwe n'oge ụfọdụ n'ime omume ndị a kọwara n'akwụkwọ ntuziaka ị ga-ahụ akwụkwọ ntuziaka Olee otú iji chịkwaa òké ahụ site na keyboard.
Ihe ndị mere kpatara òké ahụ anaghị arụ ọrụ na Windows
Mbụ, banyere ihe ndị na-emekarị ka òké ahụ rụọ ọrụ na Windows 10: ha dị mfe nghọta ma dozie.
Isi ihe kpatara kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ anaghị ahụ òké ahụ (otu a ga - atụle ha niile)
Mgbe emelite usoro (karịsịa Windows 8 na Windows 10) - nsogbu na ọrụ nke ndị ọkwọ ụgbọala maka ndị na-ahụ maka USB, njikwa ike.
Ọ bụrụ na nke a bụ òké ọhụrụ, enwere nsogbu na òké n'onwe ya, ọnọdụ nke onye natara (maka òké ikuku), njikọ ya, njikọ na kọmputa maọbụ laptọọpụ.
Ọ bụrụ na òké ahụ anaghị adị ọhụrụ - wepụ USB / nata (na-achọ ma ọ bụrụ na ịmebeghịrịrị ya), batrị nwụrụ anwụ, njikọ nke mebiri emebi ma ọ bụ eriri igwe (mebiri emebi kọntaktị), njikọ site na ọdụ USB ma ọ bụ ọdụ ụgbọelu n'ihu panel nke kọmputa ahụ.
Ọ bụrụ na gbanwere ma ọ bụ rụgharịa motherboard na kọmpụta - njikọ USB ejikwara na BIOS, njikọ na-ezighị ezi, enweghị njikọ na motherboard (maka njikọ USB na ikpe ahụ)
Ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ pụrụ iche, nke na-achọ nnọọ na-akpa ọchị, na tiori ọ nwere ike ịchọ ndị ọkwọ ụgbọala pụrụ iche site na emeputa (ọ bụ ezie na, dị ka a na-achị, ọrụ ndị bụ isi na-arụ ọrụ na-enweghị ha).
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu banyere arụ ọrụ zuru oke Bluetooth na kọmpụta, mgbe ụfọdụ, ihe kpatara ya bụ ịpị bọtịnụ nke igodo Fn + keyboard_flying na keyboard, na-agbanye n'ụdị ụgbọelu (na ebe ngosi) na Windows 10 na 8, nke na-ekweghị Wi-Fi na Bluetooth. Gụkwuo - Bluetooth anaghị arụ ọrụ na laptọọpụ.
Ikekwe otu n'ime nhọrọ ndị a ga - enyere gị aka ịchọpụta ihe kpatara nsogbu ahụ ma dozie ọnọdụ ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, gbalịa ụzọ ndị ọzọ.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na òké ahụ adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ kọmputa adịghị ahụ ya
Ugbu a gbasara ihe kpọmkwem ịme ma ọ bụrụ na òké ahụ adịghị arụ ọrụ na Windows (ọ ga - abụ maka ụmụ oke ikuku na wireless, ma ọ bụghị maka ngwaọrụ Bluetooth - maka nke ikpeazụ ahụ, jide n'aka na agbanwụrụ Bluetooth, batrị ahụ bụ "zuru" ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gbalịa ịlụ ọzọ ngwaọrụ - wepụ òké ma sonyere ya ọzọ).
Maka mmalite, ụzọ dị mfe na ngwa ngwa iji chọpụta ma ọ bụ òké n'onwe ya maọbụ usoro ahụ:
Ọ bụrụ na enwere obi abụọ ọ bụla banyere arụmọrụ nke òké n'onwe ya (ma ọ bụ eriri ya) - gbalịa ileba ya na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ ọzọ (ọ bụrụgodị na ọ rụrụ ọrụ ụnyaahụ). N'otu oge ahụ, otu isi ihe dị mkpa: ihe mgbagwoju anya nke òké ahụ adịghị egosi ọrụ ya nakwa na eriri / njikọ dị mma. Ọ bụrụ na UEFI gị (BIOS) kwadoro njikwa, gbalịa ịbanye n'ime BIOS gị ma chọpụta ma ọ bụrụ na òké ahụ na-arụ ọrụ n'ebe ahụ. Ọ bụrụ otú ahụ, ihe niile dị mma na ya - nsogbu na usoro ma ọ bụ ọkwa ọkwọ ụgbọala.
Ọ bụrụ na ejiri igwe USB jikọọ òké ahụ, gaa na njikọ dị n'ihu nke PC ma ọ bụ na eriri USB 3.0 (na-achakarị anụnụ anụnụ), gbalịa jikọọ ya na kọntaktị azụ nke kọmputa ahụ, dabara na otu n'ime ọdụ USB 2.0 mbụ (nke bụkarị n'elu). N'otu aka na laptọọpụ - ọ bụrụ na ejikọrọ ya na USB 3.0, gbalịa jikọọ na USB 2.0.
Ọ bụrụ na ị jikọtara draịvụ ike mpụga, ihe nbipute ma ọ bụ ihe ọzọ site na USB tupu nsogbu ahụ, gbalịa ịkwụsị ngwaọrụ ahụ (anụ ahụ) wee malitegharịa kọmputa ahụ.
Lelee Windows Manager Ngwaọrụ (ị nwere ike ịmalite ya na keyboard dịka nke a: pịa igodo Win + R, tinye devmgmt.msc ma pịa Tinye, iji kwanye na ngwaọrụ, ị nwere ike pịa Tab ozugbo, wee jiri akụ ala na elu, akụ aka nri iji mepee ngalaba). Hụ ma enwere òké na ngalaba "Ụmụ oke na ngwaọrụ ndị ọzọ" ma ọ bụ "ngwaọrụ HID," ma ọ bụrụ na e nwere njehie gosiri ya. Ndi òké ahụ na-apụ site na njikwa ngwaọrụ mgbe akpụrụ ya na kọmputa? (Ụfọdụ kọfịfụ ikuku na-enweghị ike ịkọwa dị ka keyboard na òké, dịka nrube nwere ike ịkọwa ya site na touchpad - dịka m nwere ụmụ oke abụọ na nseta ihuenyo, otu nke bụ n'ezie keyboard). Ọ bụrụ na ọ na-apụ apụ ma ọ bụ na ọ gaghị ahụ anya ma ọlị, mgbe ahụ, okwu ahụ nwere ike ịbụ na njikọ (ndị nwere nkwarụ ma ọ bụ kwụsịrị) ma ọ bụ wired USB.
Ọzọkwa na njikwa ngwaọrụ, ị nwere ike ịnwale ihichapụ òké (site na ịpị Ihichapụ), wee na menu (gaa menu, pịa Alt) họrọ "Action" - "Melite nhazi nhazi", mgbe ụfọdụ ọ na-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na nsogbu ahụ weere na òké ikuku, na onye nata ya jikọọ na kọmpụta na azụ azụ, chọpụta ma ọ na-amalite ịrụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bịarukwuo nso (nke mere na enwere ihuenyo) na onye na-anata ya: ọ na-ezukarị na ọ bụ ihe ọjọọ mgbaàmà (na nke a, ihe ịrịba ama ọzọ - òké ahụ na - arụ ọrụ, mgbe ahụ - enweghị - clickps, movement).
Lelee ma enwere nhọrọ iji mee / gbanyụọ njikọ USB na BIOS, karịsịa ma ọ bụrụ na motherboard agbanweela, BIOS abụrụla ntọala, wdg. Ihe gbasara isiokwu (ọ bụ ezie na e dere ya na ihe odide nke keyboard) - ntụziaka ahụ keyboard anaghị arụ ọrụ mgbe a napụrụ kọmputa ahụ (lee ngalaba na nkwado USB na BIOS).
Ndị a bụ usoro bụ isi nke nwere ike inyere aka ma ọ bụrụ na ọ bụghị na Windows. Otú ọ dị, ọ na-emekarị na ihe kpatara nke a bụ ọrụ na-ezighị ezi nke OS ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọala, a na-ahụkarị ya mgbe mmelite Windows 10 ma ọ bụ 8.
N'okwu ndị a, ụzọ ndị dị otú a nwere ike inyere aka:
Maka Windows 10 na 8 (8.1), gbalịa ịkwụsị mmalite ngwa ngwa wee malitegharịa (ya bụ, ịmalite, ọ bụghị imechi ma gbanwee) kọmputa - nke a nwere ike inyere aka.
Soro ntuziaka nke ntụziaka Emezughị ịrịọ ihe odide ngwaọrụ (koodu 43), ọbụlagodi na ịnweghị koodu ndị dị otú ahụ na ngwaọrụ ndị a amaghị na njikwa, njehie na koodu ma ọ bụ ozi "ngwaọrụ USB ekwughị" - ha ka nwere ike irè.
Ọ bụrụ na ọ dịghị otu ụzọ enyere - kọwaa n'ụzọ zuru ezu ọnọdụ ahụ, m ga-anwa inyere aka. Ọ bụrụ na, na Kama nke ahụ, ihe ọzọ arụ ọrụ nke a na-akọwaghị n'ime isiokwu, obi ga-atọ m ụtọ ma ọ bụrụ na ịkekọrịta ya na ihe ndị ahụ.